ARDUF, oo Beenisay in TPLF ay Ahayd Musuq iyo Cadaalad Daro Mid ku Dhisnayd – Rasaasa News
Nov 10, 2018 ARDUF
Jijiga, Nov 10, 2018 – Taageerayaasha ururka u dhaqdhaqaaqa Xoraynta Dadka Canfarta ee looyaqaan Anfar Revulotionary Democratic Union Front (ARDUF), ayaa dhawaan banaan bax kala horyimid Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, kolkii uu booqashada ku tagay magaalada Paris.
Taageerayaasha ayaa ku dhawaaqayey TPLF,ma ahayn musuq iyo cadaalad daro, laakiin OPDO ayaa ka cadaalad daran. Waxay sheegeen in haday cadaalad daro jirtay ay wali jirto umada canfartuna ayna wali arag isbadalka laga sheegayo Itoobiya.
Waxay ku dhawaaqayeen “waxaanu nahay jidiinka Itoobiya Djibouti iyo Eritrea oo ay Itoobiya wax u soo maraan anaga ayaa leh waanan goynaynaa.”
Abiy Axmed, aad buu uga naxay markuu arkay banaanbax laggaga soo horjeedo, marka meel walba oo aduunka ah looga riyaaqayo isbadalka uu ka wado Itoobiya. Abiy Axmed ayaa intuu Paris joogay ergo u dirsaday masuulinyiinta ARDUF, waxayna isla soo qaadeen in ay ku kulmaan Eritrea.
Madaxwaynaha Canfarta Seyoum Awal Aydahis ayaa looga yeedhay Addis Ababa Nov 7, waxaana loo sheegay in uu is casilo. Badalaada madaxwaynaha canfarta ayaa ah cadaadis Abiy Axmed uga yimid dhinaca ARDUF,ka dib kolkii ay waydiisteen in xubno badan oo ay dadku wax ka tirsanayaan in la badalo.
Canfarta ayaa muhuum u ah hindisaha Addis Ababa ee ah in ay dakad ka hesho bada cas arinkaas oo ay canfartu muhiim u ahayd wadahadalkii Eritrea iyo Itoobiya u dhaxeeyey.
Abdo Youssouf iyo Adan Bodaya oo matalayey ARDUF, ayaa Paris kula kulmay xubno dawlada dhexe ee Itoobiya ah, waxaana la isla ogolaaday in ay is casilaan madaxwaynaha ANRS iyo wasiirka qorshaha iyo magaalaynta, Aicha Mohamed, waxaa kale oo ay ARDUF codsatay in baadhid lagu sameeyo madax Booliska Deegaanka Canfarta.
Shacabka Canfarta ayaa si buuxda u taageera ARDUF, waxayna doonaysa ARDUF in ummada Canfarta cadkeeda banaanka dhigto Itoobiya, si ay dawlada ugu hirgalaan qorshayaasheeda horumarineed iyo siyaasadba.
ONLF iyo Ethiopia oo Heshiis Nabadeed Saxiixay